Akụkọ - Ya mere, oriọna ultraviolet nwere ike igbu coronavirus
Ya mere, oriọna ultraviolet nwere ike igbu coronavirus
Ọrịa na-efe efe! Ọ ga - abụ ihe jikọrọ ọnụ nke mmadụ niile na Ememme Oge opupu ihe ubi nke 2020. Mgbe anyị nwesịrị “mkpuchi” siri ike ịchọta ma na-ehichapu site na Shuanghuanglian na njakịrị ndị ọzọ, ndị enyi anyị jiri nwayọọ nwayọọ lekwasị anya na oriọna disinfection UV.
Ya mere, akwụkwọ coronavirus nwere ike igbu oriọna ultraviolet？
The coronavirus oyi baa nchoputa na ọgwụgwọ plan (ikpe version) bipụtara na nke anọ mbipụta nke National Health Nchedo Commission na State Administration nke ọdịnala Chinese na nkà mmụta ọgwụ kwuru na nje bụ chebaara ultraviolet na okpomọkụ, na okpomọkụ bụ 56 nkeji elu maka Nkeji 30. Ether, 75% ethanol, chlorine disinfectant, peracetic acid na chloroform nwere ike inactivate nje. Ya mere, oriọna disinfection na ultraviolet na-arụ ọrụ na-egbu nje.
Enwere ike kee UV n'ime UV-A, UV-B, UV-C na ụdị ndị ọzọ dịka ogologo nke ogologo ntụgharị. Ike ume ji nke nta nke nta na-abawanye, na UV-C band (100nm ~ 280nm) ka a na-ejikarị eme ihe maka disinfection na sterilization.
Ultraviolet disinfection lamp na-eji ultraviolet ọkụ nke oriọna mercury na-ewepụta iji nweta ọrụ nsị. Ultraviolet disinfection technology nwere enweghị atụ sterịization arụmọrụ tụnyere ndị ọzọ teknụzụ, na nwoke ịga ụlọ ọrụ arụmọrụ nwere ike iru 99% ~ 99,9%. Scientifickpụrụ sayensị ya bụ ime ihe na DNA nke microorganisms, mebie usoro DNA, ma mee ka ha kwụsị ọrụ nke mmeputakwa na imeghari onwe ha, iji nweta ebumnuche nke ịmụ nwa.
Ihe oriọna disinfection na-emebi na ahụ mmadụ? Ultraviolet sterilization nwere uru nke enweghị agba, enweghị ụtọ na enweghị ọgwụ kemịkalụ hapụrụ, mana ọ bụrụ na enweghị usoro nchekwa iji ya, ọ dị mfe ibute oke nsogbu n'ahụ mmadụ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ụdị ọkụ a na-acha ọkụ ọkụ na-achapu akpụkpọ ahụ, ìhè ahụ ga-apụta acha ọbara ọbara, itching, desquamation; ndị dị njọ ga-ebute ọrịa kansa, etuto ahụ na ihe ndị ọzọ. N'otu oge ahụ, ọ bụkwa "egbu egbu a na-adịghị ahụ anya" nke anya, nke nwere ike ibute mbufụt nke conjunctiva na cornea. Ogologo oge irradiation nwere ike ibute cataract. Ultraviolet nwekwara ọrụ nke ibibi mkpụrụ ndụ mmadụ, na-eme ka anụ ahụ ghara ịka nká. N'ime oge pụrụ iche n'oge na-adịbeghị anya, ikpe gbasara mmebi kpatara site na iji oriọna disinfection na-ezighi ezi nke ultraviolet na-agakarị.
Yabụ, ọ bụrụ na ịzụta oriọna disinfection ultraviolet n'ụlọ, ị ga-eburu n'uche mgbe ị na-eji ya:
1. Mgbe ị na-eji oriọna disinfection na-acha ọkụ ọkụ, mmadụ, anụmanụ na osisi ga-ahapụ ebe ahụ;
2. Anya ekwesịghị ile anya na oriọna disinfection na ultraviolet. Ultraviolet radieshon nwere ụfọdụ mmebi nke anụ ahụ mmadụ na mucous akpụkpọ ahụ. Mgbe ị na-eji oriọna disinfection na ultraviolet, ekwesịrị itinye uche na nchedo. Anya agaghị eleba anya na ọkụ ọkụ ultraviolet, ma ọ bụghị na anya ga-emerụ ahụ;
3. Mgbe ị na-eji oriọna disinfection na ultraviolet iji kpochapụ ihe ndị ahụ, gbasaa ma ọ bụ kwụgidere isiokwu ahụ, gbasaa mpaghara irradiation, ụzọ dị irè bụ otu mita, na oge irradiation bụ ihe dị ka nkeji 30;
4. Mgbe ị na-eji oriọna disinfection na ultraviolet, e kwesịrị ime ka gburugburu ya dị ọcha, o kwesịghịkwa ịbụ uzuzu na alụlụ mmiri na ikuku. Mgbe okpomọkụ dị n'ime ụlọ dị ala karịa 20 ℃ ma ọ bụ iru mmiri ahụ karịa 50%, ekwesịrị ịgbatị oge ikpughe. Mgbe ịchisịrị ala, kpochaa ya na oriọna ultraviolet mgbe ala kpọrọ nkụ;
5. Mgbe ị na-eji oriọna disinfection na-acha ọkụ ọkụ nke ultraviolet, cheta ikuku ikuku ruo minit 30 tupu ị banye n'ime ụlọ ahụ. N'ikpeazụ, anyị na-atụ aro na ọ bụrụ na ezinụlọ gị achọpụtaghị ọrịa ahụ, egbula ọgwụ ngwaahịa ụlọ. Maka na anyị ekwesighi igbu nje ma ọ bụ nje niile na ndụ anyị, ụzọ kachasị dị mma iji gbochie ọrịa coronavirus ọhụrụ bụ ịpụ obere, yi ihe nkpuchi ma saa aka ugboro ugboro.
Eze oriọna, Halogen Examination Oriọna, Ọmụma Ule Ọgwụ, mgbidi ugwu ule ìhè, Ikanam ịwa ahụ Headlight, Halogen Oriọna Maka Biochemical Analyzer,